Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0513 lat
Lesona 05 : Famoronana sy fitondrantena mendrika
26 Jan - 01 Feb 2013
Alatsinainy 28 Jan.
Vakio ny Gen. 1:26-28. Inona no toetra manokana nomena ny olombelona izay tsy nomena ny biby?
Inona marina moa ny hoe "endrik'Andriamanitra"? Niteraka ady hevitra be io fanontaniana io, ary samy manana ny heviny ny olona momba azy io. Misy famaritana vitsivitsy anefa omen'ireo andininy ireo mikasika ny toetoetr'ilay hevitra.
Voalohany, mariho fa ny hoe noforonina tahaka ny endrik'Andriamanitra dia midika hoe misy itovizana amin'Andriamanitra isika amin'ny lafiny sasany. Lafiny anankiray lehibe amin'ny endrik' Andriamanitra ny hoe nomen'Andriamanitra fahefana hanjaka amin'ireo voary hafa ny olombelona. Amin'ny maha-manam-pahefana manapaka amin'ny rehetra an'Andriamanitra, dia notendreny hanana anjara fanapahana ny olombelona tamin'ny nanomezany azy ireo fahefana hanjaka amin'ny hazandrano sy ny voro-manidina ary ny biby mandeha amin'ny tany.
Mariho koa fa nikasa hamorona olona tahaka ny endrintsika Andriamanitra -izany hoe, tafiditra ao anatin'izany endrika izany ny maha-Andriamanitra Telo Izay Iray an'Andriamanitra. Manaraka izany, lahy sy vavy no namoronany ny olombelona. Ny endrik'Andriamanitra izany dia tsy miseho amin'ny fahafenoany ao amin'ny olona tokana fa ao anatin'ny fifandraisana. Tahaka an'Andriamanitra Telo Izay Iray miseho ao anatin'ny fifandraisan'Izy Persona telo, dia tahaka izany koa, ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny olombelona dia miseho ao anatin'ny fifandraisan'ny lahy sy ny vavy. Ny fahafahana mamorona fifandraisana dia ampahany amin'ny endrik' Andriamanitra. Mazava ho azy fa ny fifandraisana dia midika ho andraikitra sy midika hoe tompon'andraikitra ianao, ary izany dia midika ho fitondrantena mendrika. Eto izany isika dia omena tsipy hevitra mafonja ny amin'ny hoe ao amin'ny tantaran'ny famoronana no misy ny fototry ny fitondrantena mendrika.
Vakio ny Gen. 9:6 sy ny Jak. 3:9. Mifamatotra mazava amin'ny foto-kevitra momba ny fitondrantena mendrika ny hevitra hoe noforonina tahaka ny "endrik'Andriamanitra" ny olombelona. Amin'ny fomba ahoana?
An'arivo taona maro ny olombelona no efa nitolona tamin'io resaka momba ny fitondrantena mendrika io. Mbola tsy voarainao akory hoe inona marina moa no fitondrantena mendrika, no indro fa misy fanontaniana lalina tsy tambo isaina apetrak'io hevitra manontolo momba ny fitondrantena mendrika io. Nahoana moa ny olombelona no tokony hanana fahatsiarovan-tena ara-pitondrantena, foto-kevitra manavaka ny marina sy ny diso, fa tsy tahaka ny voangory sy ny parasy, ary ny rajako mihitsy koa aza? Ahoana no ahafahan'ny zava-manana aina noforonina tamin'ny zaka izay tsy manana fahalalana akory momba izay resaka fitondrantena mendrika (zaka toy ny 'quark' (pitin-jaka fototra), ny 'gluons', ny 'électrons' (voanaratra), sns), mahatsapa foto-kevitra ara-pitondrantena? Ny valiny dia hita ao amin'ireo toko voalohandohany ao amin'ny Baiboly, izay manambara fa voary manan-tsaina amam-panahy noforonina araka ny endrik'Andriamanitra ny olombelona.